एनआईसी एसिया लघुवित्तको आईपीओ आवेदन सर्वसाधारका लागि खुल्ला, कति कित्ताका लागि गर्ने आवेदन ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एनआईसी एसिया लघुवित्तको आईपीओ आवेदन सर्वसाधारका लागि खुल्ला, कति कित्ताका लागि गर्ने आवेदन ?
काठमाडौं । एनआईसी एसिया लघुवित्तले विहिबारदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री खुला गरेको छ । । लघुवित्तले ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँबराबरको ४७ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो ।
निष्काशनमा आउने आईपीओमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात् ७४ हजार कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याएको छ । यस्तै ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३७ हजार ८०० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड गरेको छ । बाँकी रहेको ४४ लाख ४३ हजार २०० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्नेछ ।
१०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा निष्कासन हुन लागेको लघुवित्तको आईपीओमा असार १० देखि १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने लघुवित्तले जनाएको छ । १४ गतेसम्म सबै सेयर बिक्री नभएमा असार २४ गतेसम्म आवेदन दिने समय रहने लघुवित्तले जनाएको छ ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लघुवित्तको सेयरमा कम्तीमा १० कित्ता र बढीमा २ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका तोकिएका शाखा कार्यलयबाट आवेदन गर्न सकिनेछ । साथै मेरो सेयर प्रयोगकर्ताले मेरो सेयरमार्फत पनि आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
लघुवित्तले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओ लघुवित्त क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो हो । लघुवित्तले निष्काशन गर्न लागेको आइपीओमा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटलले गर्ने छ।
धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो समय लागू गरेको धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड नियमावली अनुसार सबै योग्य आवेदकलाई १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसअनुसार लघुवित्तले सर्वसाधारणमा ४४ लाख ४३ हजार २०० कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। यसबाट ४ लाख ४४ हजार ३२० जना आवेदकलाई १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँड गर्न पुग्दछ।
आईपीओ ४ लाख ४४ हजार ३२० भन्दा कम आवेदक भएको खण्डमा सबै आवेदकलाई १० कित्ता सेयर बाँडफाँड गर्न पुग्छ। यदि सो भन्दा धेरै आवेदकबाट आईपीओमा आवेदन गरेको खण्डमा सेयर बाँडफाँड गोलाप्रथामा जानेछ भने थोरै संख्यामा आवेदन परेको खण्डमा केही आवेदकले गोलाप्रथाबाट थप १० कित्ता गरि २० कित्तासम्म पाउनसक्छन्।
६ सयमा किनेको पाल साँढे तीन हजारमा बेच्ने विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ, अत्याधिक महँगोमा पाल बिक्री गर्नेविरुद्ध प्रहरीले कालाबजारी मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।कागेश्वरी […]
अमेरिकामा सहकर्मी तपाईका साथी किन हुदैनन् ?
विजय थापा ,वाशिंगटन डिसी , भ्रम नरहोस् ,अमेरिकामा सहकर्मी तपाईका साथी कहिले हुदैनन् l तर नहुने […]
मधेशी जनता नरिझाई कसरी संविधान लागू हुन्छ ? -अमरेशकुमार सिंह
साउन २२ । काठमाडौँ, आफूलाई सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ दिँदै नेपाली काग्रेसका सभासद् डा अमरेसकुमार सिंहले […]
कान्तिपुरलाई सर्वाेच्चको ७२ घण्टे अल्टिमेटम
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर मिडिया गु्रपलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा ७२ घण्टाभित्र बयान दिनका […]
काठमाडौं । सडकमा एकाधिकारको पक्षमा यातायात सेवा नै रोकेर आन्दोलन गर्ने कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीको […]